Vehivavy shinoa: Hihaona Mafana Vehivavy Shinoa ao amin'ny Olona Tokana Travel
Vehivavy shinoa: Hihaona Mafana Vehivavy Shinoa ao amin’ny Olona Tokana Travel
Ny fifandraisana eo amin’ny Tandrefana ny lehilahy sy ny vehivavy Shinoa dia lasa malaza kokoa noho ny andro. Vehivavy avy any Shina no malaza noho ny tsara tarehy mijery toy izany koa ny toetra tsara. Raha tsy zatra ireo vehivavy, eto ambany teo amin’ny rehetra tokony ho fantatrao momba tsara tarehy ny vehivavy Shinoa. Ny ankamaroan’ny Shinoa vavy dia mandry fahizay ka tsy manana bebe kokoa voatokana toetra. Sinoa vehivavy ihany koa ny fomba nentin-drazana, sy mpandala ny nentin-drazana raha oharina amin’ireo vehivavy avy amin’ny faritra hafa eto amin’izao tontolo izao. Matetika izy ireo no mazàna manome ny fahatsapana fa izy dia tsy matoky na izany aza, amin’ny lafiny iray hafa izy ireo no tena mahaleotena. Izy ireo no tena tompon’andraikitra sy mazoto miasa. Izy ireo dia tena saro-kenatra sy tsy dia matetika tsiky na dr rehefa resaka saro-pady no ho resahina na raha toa ka mahatsiaro ho menatra na tsy mahazo aina. Ireo vehivavy ireo koa dia mendri-pitokisana, ary tena feno fanoloran-tena ny mpiara-miasa. Vehivavy shinoa no tena tsara tarehy sy fampirantiana tena tatsinanana haja. Indrindra ny vehivavy petite vatana, mahitsy lava volo mainty, boribory somary lavalava endrika, lehibe mainty maso amin’ny roa heny na crease ny hodi-maso, nanambara ny tetezana ny orona, ary dia tena fohy. Sinoa vehivavy ireo koa dia tena tsara tarehy raha oharina amin’ireo vehivavy avy amin’ny faritra hafa eto amin’izao tontolo izao, sy ireo mbola tanora na dia efa antitra aza. Izany no tena mahazatra ny mahita ny vehivavy ao Shina izay any amin ny s fa tahaka izy ireo. Sexy vehivavy Shinoa no mamy sy tony voices izay hahatonga ny olona firohotana ho azy ireo. Rehefa mahazo ny Shinoa sipa mangataka azy mba hibitsika hoe zavatra tsara ho any ny sofiny, izany dia hahatonga anao ho tsy manan-kery eo amin’ny lohalika, ara-bakiteny.
Fisakafoana ny fahalalam-pomba no tena zava-dehibe ny Sinoa. Ny zavatra kely toy ny ahoana hitondra tena ho amin’ny latabatra fisakafoana na mampiasa ny chopsticks araka ny tokony ho izy dia hamaritana raha toa ka ny fianakaviana ny vehivavy tahaka anao na tsia. Raha te-hihaona vehivavy ao amin’ny mora sy ny takatry ny fomba hanandrana Shinoa mampiaraka toerana. Toerana toy izany dia manome fahafahana anao mba mifandray amin’ny s ny vehivavy avy amin’ny fampiononana lehibe eo amin’ny solosaina ao amin’ny tena mora ny vola lany. Rehetra izany no ilainao dia ny solosainao sy ny fidirana aterineto. Mba hahomby amin’ny aterineto mifandray amin’ny maha-vehivavy maro, ary matetika araka izay azo atao. Raha toa ianao ka mitady ny hihaona Shinoa vehivavy, dia fahazoan-dalana isika miezaka Shina Lahatsary Mampiaraka na Aziatika daty. Misy antsika, izay tia ny hihaona vehivavy mifanatrika. Raha toa ianao ka toy izany karazana ny olona iray, ary te-hihaona tena marina Shinoa lady, izany no tokony hatao mba handeha any Shina sy ny mifandray amin’ny ny vehivavy any. Mifanerasera amin’ny vehivavy ao amin’ny firenena an-trano ihany koa ny manome anao sarobidy fahafahana hianatra bebe kokoa momba ny kolontsaina. Raha toa ianao ka tsy liana amin’ny mitady vehivavy Shinoa monina any ivelany ny toerana tsara indrindra mba hihaona aminy amin’ny olona eo an-toerana ny zava-nitranga izay no mety hisarika ny vehivavy Shinoa. Jereo eo an-toerana ny lisitra mba mahita izay zava-nitranga toy izany ireo, ary miezaka ny hanatrika maro araka izay azo atao. Raha te daty Shinoa vehivavy, ny fahombiazana dia ho tapa-kevitra amin’ny fomba tsara ianao mahalala azy. Hahazo mba hahatakatra ny vehivavy ny mahalala ny zavatra manaraka ireto momba azy. Rehefa tonga ny fifandraisana rehetra fa ny vehivavy avy any Shina atao dia ny lehilahy iray izay ho tompon’andraikitra sy izay ho vonona ny hanolo-tena ny fifandraisana. Noho ny kilasy olana ao Shina, ny ankamaroan’ny olona fotsiny te-hanambady vehivavy iray satria izy dia avy ny tsara fianakaviana. Ny vehivavy koa mitady ny fifandraisana amin’ny vahiny ny olona izay atolotra azy ireo ho tena tia. Sinoa vehivavy dia be kokoa ny mpandala ny nentin-drazana momba ny firaisana ara-nofo raha ampitahaina amin’ny Tandrefana ny vehivavy. Izy ireo dia ho tena tsy te hanao firaisana ara-nofo amin’ny lehilahy raha toa izy ireo dia tsy mino fa izy no ilay lehilahy sahaza ho azy ireo. Vehivavy shinoa mampiasa ny firaisana ara-nofo ho toy ny fanehoana ny fitiavana ary noho izany dia aleoko mba ho akaiky amin’ny olona iray izy ireo, ny fifandraisana maharitra. Ny fanambadiana dia tena zava-dehibe ny maro amin’ny Shinoa indrindra ny vehivavy. Ny in-lalàna ireo ihany koa ny natao tao avo misy vidiny satria ao Shina dia nino fa rehefa manambady ny olona iray, tsy manambady ho fianakaviana iray manontolo, ary tsy hoe manambady ny olona. Izany ihany koa ny fanao mahazatra ao Shina ho an’ny vehivavy ny miara-miaina amin’ny vadiny ny fianakaviana aorian’ny fanambadiana. Sinoa vehivavy handray ny fanambadiana tena zava-dehibe sy ny fisaraham-panambadiana dia tokony tsy safidy ho azy ireo. Maro ny lehilahy sy ny vehivavy ao Shina mbola mieritreritra ny fisaraham-panambadiana dia mahamenatra sy izay faharoa ny fanambadiana tsy tokony ho voly. Na dia i Shina miha-nanangana ny kolontsaina Tandrefana, ny fianakaviana nentim-paharazana ny rafitra dia mbola tena sarobidy sy mihazona malaza toerana ao amin’ny kolontsaina Sinoa. Ny Sinoa fianakaviana dia manamafy amin’ny fitiavana sy ambony moraly eo amin’ny fianakaviana. Nentim-paharazana no andrasana amin’ireo vehivavy mba hijanona ao an-trano sy mikarakara ny an-trano, ny ankizy, sy ny sisa amin’ny fianakaviana. Maro maoderina Shinoa vehivavy tsy manana asa, fa mbola izy ireo ny andry ao an-tranony. Ny fampianarana dia tena sarobidy any Shina sy ny firenena dia anisan’ny avo indrindra mamaky teny sy manoratra tahan’ny eo amin’izao tontolo izao. Ireo izay tena nahita fianarana no tena hajaina eo amin’ny fiaraha-monina. Na ny lehilahy sy ny vehivavy ao Shina efa nihoatra noho hajaina fitsipika toy ny siansa sy fitsaboana.
Sinoa vehivavy vonona hiasa mafy sy hamonjy vola
Matetika izy ireo mba manahy ny amin’ny ampitso, fa tsy mba hifaly amin’izao fotoana izao. Izy ireo ihany koa ny mifaninana eo amin’ny sehatra mitovy toy ny lehilahy mitovy amin’ny asa aloha. Ny tena teratany fivavahana ao Shina dia Confucianism. Dia ny fanahinao ao amin’ny kolontsaina Sinoa sy ny fototry ny fomba ny olona mitondra tena. Andro ankehitriny ny fivavahana ao Shina dia ahitana ny Bodisma izay malaza indrindra ny fivavahana narahin’ny Kristianina. Kely misy fahasamihafana eo amin’ny kolontsaina Sinoa sy ny fivavahana. Noho izany dia zava-dehibe mba handray liana tamin’ny fivavahana ny vehivavy te-hahazo lehibe amin’ny satria izany dia mamaritra ny karazana fomba fanao izay dia mino. Inona no hataony ho an’ny voly? Vehivavy shinoa fitiavana nandeha an-tongotra sy ny fanatrehana karaoke fotoam-pivoriana? Ny Shinoa no tena tia mihira, sy ny maro no tena tsara izany. Akanjo sy hianatra ny Shinoa fisakafoana ny fahalalam-pomba. Sinoa miezaka mba ho tena ara-dalàna sy ireo manantena ny rehetra mba hanaraka ny ohatra omeny. Mianatra momba ny nahandro Shinoa sy ny fomba fampiasana chopsticks. Isaky ny maka vehivavy Shinoa avy amin’ny daty amin’ny trano fisakafoanana ho azo antoka fa ny fampiharana ny Shinoa fisakafoana fitsipika, ny tovovavy amin’ny ho faran’izay gaga ianao raha fantatrao ny fomba fampiasana chopsticks araka ny tokony ho izy. Ny mitandrina ny vehivavy Shinoa liana foana ny zavatra nomanina fa ny roa azonao atao ny miara-miasa. Rehefa ny vehivavy iray liana ianao mahita foana ianao manao zavatra izy dia hahita azy mahaliana. Fantaro ny vahoaka izy dia akaiky toy izany, araka ny fianakaviany sy ny namany. Ho afaka ny hifanaraka ho any ny vehivavy ny fianakaviana sy ny ara-tsosialy faribolana no tena zava-dehibe raha tianao ny vehivavy mba hanolo-tena ho anao. Ho mahalala fomba, ary ny namana ho azy ny fianakaviany sy ny namany, ary asehoy azy fa tena liana azy ireo. Mianatra momba ny kolontsaina sy aza mihevitra fa fotsiny, satria izy no Asian ny kolontsaina dia mitovy amin’ny hafa rehetra ao Azia fiaraha-monina. Raha misy ny endriky ny fahazarana na kolontsaina izay tsy zatra, manontany ny momba azy ireo mba hahatakarana azy kokoa. Misy anao mandehana ankehitriny ianao ka vonona ny daty Shinoa ny vehivavy, ary ianao afaka manomboka amim-pahatokiana ny mahomby fikarohana ho an’ny olona iray
← Amin'ny Fiarahana soso-kevitra ho an'ny vehivavy izay te karazana amin'ny teny koreana. Soso-kevitra ho an'ny Fiarahana Korea